तपाई शुक्रबार जन्मिएको हो ? त्यसोभए तपाईको स्वभाव यस्तो छ ?
शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन, दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुने गर्दछ । यस्ता व्याक्तिलाई धेरैजसो रचनात्मक क्षेत्रमा लागेको देखिन्छ ।
संगीत, फिल्मी क्षेत्र, मिडिया, खेलजस्ता कुराहरुले आकर्षित गर्ने ।
मधुर स्वरमा बोल्ने र मनमोहक मुस्कानका मालिक ।
निकै भावुक हुने, जसका कारण कहिलेकाँही निकै दुखी हुने ।
पुरुष हो भने महिलाहरुमा र महिला हुनुहुन्छ भने पुरुषहरुमा लोकप्रिय हुने ।
आफ्नो सम्बन्धमा निकै सजक हुने तर, कहिलेकाँही यहि सजकता नै सम्बन्धमा भारी पर्ने ।
धेरै साथी हुने तर साँचो मित्र निकै कम ।
रिस निकै कम उठ्ने तर जब उठ्छ नजिक भएका व्यक्तिको हालत खराब हुन्छ ।
राम्रा गुणहरु नै तपाईंका लागि नराम्रो साबित हुने ।
धनको कमी नहुने तर तपाईं त्यसलाई बचत गर्न पनि नसक्ने ।
प्रत्येक कुराहरुमा सफलता निकै ढिलो पाउने तर जब पाउनुहुन्छ स्थायी रुपमा पाउने ।
मेहनती हुने र संघर्ष गर्न सक्ने ।